အသက် ၃၀ အရွယ်မှာ မီလီယံနာတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
I was not born intoarich family. In fact, I grew up inalittle town called Pyay. My father wasawatch repairman. He repaired watches foraliving for over 25 years. ကျွန်တော် ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ မိသားစုမှာ မွေးဖွားခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် ပြည်မြို့ မှာ မွေးပြီး ပြည်မှာပဲ ကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အဖေက နာရီပြင်တဲ့အလုပ်နဲ့ အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ် ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အဖေ အဲဒီအလုပ်ကို ၂၅ နှစ်ကျော် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
When I went to study at Singapore Poly in Singapore, I had to overcome many obstacles. I couldn’t speak English fluently. I held many odd jobs asakitchen helper, asawaiter, asasales promoter, etc. I ran out of money one day, and I had to “sell” my blood for $30 atamedical research centre. That was one of my low points andamotivating factor in life. ကျွန်တော် ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့ စင်္ကာပူကို သွားပြီး ကျောင်းတက်ဖို့ အခွင့်အရေး ရခဲ့ပါတယ်။ စင်္ကာပူရောက်တော့ အခက်အခဲတွေ အများကြီးကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ကောင်းကောင်း မပြောတတ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျောင်းတက်ရင်း အလုပ်တွေ အများကြီး လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မီးဖိုချောင်အကူ၊ စားပွဲထိုး၊ အရောင်းသမား စသည်ဖြင့် ကြုံရာအလုပ်ကို လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ ကျွန်တော့်မှာ ပိုက်ဆံ လုံးဝပြတ်သွားပါတယ်။ ပိုက်ဆံအမြန်ရဖို့ ဆေးဝါးသုတေသနဌာနတစ်ခုမှာ ကျွန်တော့်သွေးကို ဒေါ်လာ ၃၀ နဲ့ ထုတ်ရောင်းခဲ့ရပါတယ်။ ဒါတွေက ကျွန်တော့် ဘဝမှာ အောင်မြင်ဖို့အတွက် တွန်းအားတွေ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
I started my first business called ZillionTech.com in Singapore in 2008 with my savings of $1,000 atasmall office (about 70 sqf) in Bugis area. To save money and traveling time, I decided to live in the office. I slept on the floor beside my office table. I showered in the office toilet. I struggled for over one year. In 2009, my bank account balance was hitting zero many times. I couldn’t even pay my office rent. I had to eat instant noodles for one whole month. ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော် စုဆောင်းထားတဲ့ ဒေါ်လာတစ်ထောင် အရင်းအနှီးနဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့  ပထမဆုံး IT လုပ်ငန်းကို ZillionTech.com ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံ Bugis နားက ၇၀ ပေပါတ်လည် ရှိတဲ့ ရုံးခန်းသေးသေးလေးမှာ စလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အချိန်ကုန် ငွေကုန် သက်သာဖို့ အတွက် ကျွန်တော် ရုံးခန်းထဲမှာပဲ နေဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ လိုက်ပါတယ်။ အိပ်တော့ ရုံးစားပွဲဘေးက ကြမ်းပြင်မှာ ကျွန်တော် အိပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရုံးခန်းဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ရေချိုးခန်း မရှိပါဘူး။ အိမ်သာထဲမှာ ရေချိုးခဲ့ရပါတယ်။ နောက်တစ်နှစ်ကြာတဲ့အထိ ကျွန်တော့်လုပ်ငန်းက ဝင်ငွေကောင်းကောင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့  ဘဏ်စာရင်း လက်ကျန်က မကြာခဏ သုညပြနေခဲ့ပါတယ်။ ရုံးခန်းလခတွေ ကျွန်တော် မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုတ်တွေပဲ တစ်လလုံးလုံး ကျွန်တော် စားခဲ့ရပါတယ်။
But in September 2009, I hadaturning point in my life. I came to realize that I could make use of the infinite power of human mind in order to become successful in life. Within one year, my business was making over $30,000amonth. Two years after that, I boughtacondominium for $1.135 million. ၂၀၀၉ စက်တင်ဘာလထဲမှာ ကျွန်တော့်ဘဝမှာ အပြောင်းအလဲ အကြီးအကျယ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လူသားတွေရဲ့  စွမ်းအားကြီးမားတဲ့ စိတ်ကို အသုံးချပြီး ဘဝမှာ အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားလို့ရပါလားဆိုတာ ကျွန်တော် နားလည် သိရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲ ကျွန်တော့်လုပ်ငန်းကနေ လစဉ် ဒေါ်လာသုံးသောင်းကျော် အမြတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် (၂) နှစ်ကြာတော့ ကျွန်တော် စင်္ကာပူမှာ ဒေါ်လာ (၁.၁၃၅ ) သန်း ကျော်တန်တဲ့ ကွန်ဒိုကို ဝယ်နိုင်သွားပါတယ်။
I am not saying this to boast, but to show thataman’s life can be altered just within one year by his sheer will. It took me just3years to becomeamillionaire. Subsequent millions become so much easier. ကျွန်တော် ဒါတွေကို ပြောပြနေတာ ကြွားချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ရဲ့  ဘဝကို တစ်နှစ်အတွင်းမှာ ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုထဲနဲ့ ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မီလီယံနာတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ကျွန်တော့်အတွက် (၃) နှစ်သာ ကြာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် မီလီယံဒေါ်လာတွေ ရှာဖို့ဆိုတာ အများကြီး လွယ်ကူသွားပါပြီ။
Another message that I want to give is that you can get rich inalegal, ethical and moral way if you put your heart to it. နောက်ထပ်ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုက သင်လည်းကြိုးစားမယ်ဆိုရင် ချမ်းသာကြွယ်ဝနိုင်ပါတယ်။ တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းက၊ လူ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့၊ ကိုယ်ကျင့်တရားလည်း ကောင်းမွန်တဲ့ လုပ်ငန်းမျိုးနဲ့ ကြွယ်ဝချမ်းသာနိုင် ပါတယ်။ Thank you. Nay Min Thu စာကြွင်း... စင်္ကာပူမှာ ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကို မေးတဲ့သူများအတွက်ပါ။ စင်္ကာပူမှာ လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းများကတော့... (1) ShweRooms.com (2) ShweSG.com (3) ZillionTech.com (4) AppWarrior.com (5) KoolAppz.com နဲ့ အခြားလုပ်ငန်းများ မြန်မာပြည်မှာ လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းများ... (1) iMyanmarAds.com (2) iMyanmarHouse.com
အောင်မြင်ပျော်ရွင်နေတဲ့သူတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ Simple Secret of Happy People မှာ ဘ၀မှာ ပျော်ရွှ... More
အသက်ကြီးသော်ငြား ဇွဲမလျော့သည့် KFC ကြက်ကြော်ဆိုင်ကို စတင်ခဲ့သူ
KFC ဆိုတာ အမေရိကန် ကြက်ကြော်တစ်မျိုးကို ခေါ်ဆိုတာ အခု ရန်ကုန်မှာ KFC ဆိုင် စဖွင့်နေပြီမို့ လူအတော်များများ သိနေလောက်ပါပြီ။ KFC ရဲ့ အရှည်ကောက်က Kentucky Fried Chicken ပါ။ ဒါပေမဲ့ KFC ဆိုင်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၆၀ လောက်က အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သူ ကာနယ်ဆင်းဒါး ( ColonelSanders ) ဆိုတဲ့ အဖ... More
မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိဘူး .... မဖြစ်သေးတာပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဦးဝေဖြိုး
ဦးဝေဖြိုးဟာ ရသာချိုကုမ္ပဏီရဲ့ Managing Director တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ရသာချို ကုမ္ပဏီကတော့ ယမ်ယမ် အသင့်စားခေါက်ဆွဲနဲ့ ရှင်းရှင်းအသင့်စားကြာဇံအထုတ်တွေကို မြန်မာတစ်ပြည်လုံးနဲ့ နိုင်ငံခြား ဈေးကွက်အထိပါ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဝေဖြိုးအနေနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ပညာသင်ယူခဲ့တ... More
အမေရီကန်မှာ အကျော်ကြားဆုံးသော စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်ပညာရှင် JIM ROHN
စာဖတ်ခြင်းဆိုတာ အကြောင်းအရာ၊ ဖြစ်စဉ်၊ အတွေ့အကြုံ၊ အတွေးအခေါ်များစွာကို ခဏတာအတွင်းမှာ ရရှိစေနိုင်ပြီး၊ ထိုအချက် အလက်တွေမှတဆင့် ဘ၀ရဲ့အခက်အခဲပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနည်းလမ်းရှာတွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
MOTIVATION (စိတ်တွန်းအားပေးခြင်း) Human have remarkable ability,... More
Red & Blue Ocean Strategy (ခေတ်ပြိုင်စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာ)
Red &Blue Ocean Strategy (ခေတ်ပြိုင်စီးပွားေ၇းမဟာဗျူဟာ)
'ပြိုင်ဖက်ကိုအနိုင်ယူဖို့ယှဉ်ပြိုင်သတ်ပုတ်နေရတဲ့ market space ကိုသွေးချင်းချင်းနီနေတဲ့ Red Ocean လို့ သူကပြောပြီး ပြိုင်ဖက်မရှိတဲ့၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုတာနဲ့သက်ဆိုင် ခြင်းမရှိတဲ့ market space ကိ... More
ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများမှာတွေ့ရတဲ့ အမူအကျင့်ကောင်း ( ၉-ခု )
တချို့လူတွေ ဘာဖြစ်လို့ အရမ်းအောင်မြင်နေကြသလဲဆိုတာ စဉ်းစားမိကြလား။ အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေရှိလို့၊ စိတ်အားထက်သန်လို့၊ ဇွဲကောင်းလို့ ဒါမှမဟုတ် ကံကောင်းသွားလို့လည်း ဖြစ်တတ်ပေမယ့် အောင်မြင်တဲ့လူ တော်တော်များများမှာ အမူအကျင့်ကောင်းလေးတွေရှိကြပါတယ်။
၁။ သူတို့တရားထိုင်ကြပြီး စိတ်တည်ငြိမ်ကြပါ... More